Shaja kabusha iselula ye-Santander kulula, ukhululekile futhi uphephile - Shaja kabusha iselula
Gcwalisa ibhalansi yakho yeselula ngokushesha nangokuphephile, kusukela ekunethezekeni kwekhaya lakho, ihhovisi noma ama-ATM, ngebhange lase-Santander. Ungaphelelwa ibhalansi kulayini wakho Weselula, funda ukushajwa kabusha iselula ye-Santander lapho kukufanele khona futhi nini.
Manje ukuya emahhovisi asebhange akuseyona inketho yakho kuphela. Ibhange le-Santander linezinhlobonhlobo zeziteshi zokushajwa kabusha iselula yakho: iwebhusayithi, ama-ATM, ihhovisi lezohwebo, i-Santander Río App kanye nokubhanga ngocingo.
Ungashajwa kanjani kabusha i-Santander mobile online?
Ukuze ushaje kabusha iselula yakho nge-Banco Santander ku-inthanethi, kufanele ufake ne-NIF yakho noma igama lomsebenzisi kanye nekhodi yokufinyelela ebhalisiwe ngaphambilini. Ukuze wenze lokhu, qondisa isiphequluli sakho ekhasini lasekhaya lebhange lase-Santander bese uchofoza isigaba Ukufinyelela kwekhasimende.
1.- Uma usungaphakathi, yiya engxenyeni ethi Izinkokhelo Nokudluliselwa
2.- Khetha inketho yeselula yokushaja kabusha
3.- Faka i-opharetha yeselula ofuna ukuyishaja kabusha:
• I-Ono • I-Carrefour Mobile
• I-Euskaltel • I-Pepephone
• Iselula ejabulisayo • Simyo
• Iselula eningi • I-Vodafone
• I-MoviStar • I-Yoigo
4.- Faka inombolo yocingo kanye nenani lokushajwa kabusha
5.- Khetha ikhadi ofuna ukulishajwa kabusha (isikweletu noma idebhithi)
6.- Qinisekisa ukushajwa kabusha kanye ne-voila, kulula lokho, umakhalekhukhwini usuvele ushajwa
Gcwalisa iselula ngohlelo lokusebenza lwe-Banco Santander
Uhlelo lokusebenza leselula le-Banco Santander limahhala ngokuphelele futhi iyatholakala ku-iOS ne-Android. Ungayilanda ku-App Store naku-Google Play. Kusukela kuhlelo lokusebenza lwe-Banco Santander, gcwalisa kabusha ifoni yakho noma nini lapho ufuna.
Ukuze ufinyelele, qedela izinkambu eziceliwe ngedatha efanayo naleyo oyifaka ku-Santander ku-inthanethi. Lapha ungakwazi ukushajwa kabusha zonke izinombolo zikamakhalekhukhwini oke wawashajwa kabusha ngokubhanga nge-inthanethi. Esigabeni esithi "Izinkokhelo Nokushajwa kabusha" uzobona uhlu olunazo zonke izinombolo zeselula ezitholakalayo ukuze uzishaje.
Khetha inombolo yeselula ofuna ukuyishaja kabusha, faka inani ozofakwa kulo bese yikho nje. Uma udinga ukuhlola noma ukulondoloza amarisidi wokushajwa kwakho kabusha, ungawaphrinta ku-Santander ku-inthanethi.
Lolu hlelo akulona lodwa oluzoshaja kabusha iselula ye-Santander, kukhona nezinye, isibonelo, i-Mobile Supernet App iyisicelo se-Banco Santander sama-smartphone. Kufana nokuba nehhovisi kumakhalekhukhwini wakho, ngoba ngaphandle kokushajwa kabusha ungabheka isimo sama-akhawunti akho noma amakhadi, ubone izintengo zesitoko emakethe kazwelonke, wenze ukudluliselwa kanye neminye imisebenzi yebhange ye-inthanethi.
Imodi yokushajwa kabusha enezinhlelo zokusebenza zeselula idinga ukuthi idivayisi esetshenzisiwe ibe nesistimu yokusebenza ye-iOS noma ye-Android, enokufinyelela ku-inthanethi futhi ehlangabezana nezimo eziyisisekelo ezidingekayo ekuhlinzekweni kwesevisi. Izindleko zokuphequlula i-App kuzoba yilezo ezikhokhiswa inkampani yomakhalekhukhwini kanti ibhange lase-Santander ngeke libhekane nokwehluleka kwesicelo.
Shaja kabusha iselula ye-Santander kuma-ATM
Ngekhadi lakho lasebhange le-Santander ungakwazi ukushajwa kabusha iselula yakho ngokuya kunoma iyiphi i-ATM yeqembu le-Santander. Imisebenzi eyenziwa ku-ATM ingase ikhokhelwe ikhomishini. Ngaphambi kokwenza lokho, thintana negatsha lakho noma ngokushayela isikhungo sethu sezingcingo ku-915 123 123.
Ukuze ushaje kabusha iselula yakho ngama-ATM, landela lezi zinyathelo:
Khetha umsebenzi wokuthenga
faka inani futhi izofakwa ngokuzenzakalelayo ocingweni
Shaja kabusha iselula yakho nge-SMS
E-Santander Rio (Argentina) ungashaja kabusha ngokuthumela i-SMS. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuba negama lakho lomsebenzisi nephasiwedi Santander Río. Bhalisa inombolo yakho yeselula futhi unike amandla zonke izinombolo ozifunayo, ngaphambilini bebengena kwi-Online Banking esigabeni seMobile Banking.
Kubalulekile ukukhomba inombolo ngayinye ngegama-mbumbulu, isibonelo "Pedro". Bese uthumela i-SMS ku-22322 negama elithi "recharge", kulandelwa inani kanye negama-mbumbulu, isibonelo: I-Top up 10 Pedro. Usulungile, ozozuzayo futhi uzothola isaziso nge-SMS esazisa ukuthi ukushajwa kabusha kwenziwe ngempumelelo. Izindleko ze-SMS ngayinye zizoncika enkampanini yamaselula ehlinzeka ngenkonzo yamakhasimende. Ukwengeza, idivayisi kufanele ikwazi ukwenza lobu buchwepheshe, ivulwe futhi ingaphakathi kwendawo yokumboza.
Phezulu kuselula » Amabhange » Shaja kabusha iselula ye-Santander
Amazwana angu-1 kokuthi "Shaja kabusha iselula ye-Santander"
Pingback: Shaja kabusha iselula ye-Simyo ngokushesha, elula futhi ephephile - Shaja kabusha iselula